Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ihe Ndị Ruuru Mmadụ » N'ime paịpụ, n'ime ogige nduru: Ebe ndị na -enweghị ebe obibi bi
omenala • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • Tourism • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ebe ndị na -enweghị ebe obibi bi
Ebe ọtụtụ mmadụ na-enweghị ọrụ na ọtụtụ ndị kwụsịrị ụgwọ ụlọ ma ọ bụ mgbazinye ụlọ, enweghị ebe obibi na-aghọwanye ọrịa karịa n'ihi ọrịa COVID-19.
Maka ndị nwere ihu ọma, ndị na -achọpụta na ha enweghị ebe obibi na -enwe ike ibikọ n'ụlọ ha na ndị ezinụlọ ha.
Maka ndị na -enweghị ebe ọzọ ha ga -aga, enwere ebe nchekwa, mana oghere pere mpe.
Yabụ ndị chọtara onwe ha n'okporo ụzọ achọtala ụzọ pụrụ iche ha ga -esi dozie enweghị ebe obibi.
Eleghi anya ụdị ụlọ obibi nwa oge bụ ụlọ ntu. Ha na -epulite dị ka obere obodo n'akụkụ ụzọ na n'ogige ntụrụndụ ozugbo olu na -eto n'otu ntabi anya. Ọtụtụ obodo na -eme 'nchapu' ma na -amanye ndị na -enweghị ebe obibi ịpụ, naanị chọta ebe obibi ọhụrụ ka ebugharị ebe ọzọ n'echi ya. Ọ bụ egwuregwu na -aga n'ihu na -atụgharị dice na gafee bọọdụ egwuregwu Monopoly nke enweghị ebe obibi.
N'okpuru àkwà mmiri bụ ebe ndị nkịtị ndị na -enweghị ebe obibi na -ezukọ ma na -enwekarị obodo nwere ọtụtụ nkọwa. Ọ na-enyere aka ịnwe ebe mgbaba dị elu site na ihu igwe yana ịpụ n'anya nke anya nke ndị na-enweghị ebe obibi. Ọtụtụ ebe ndị a bụ ogige, obere obodo, nke bụ ntọala ụlọ maka narị mmadụ ole na ole.
N'ime ụgbọ ala gị
Maka ọtụtụ ndị na -enweghị ebe obibi n'oge na -adịbeghị anya, ha ka nwere ụgbọ ala ha wee biri ebe ahụ. A na -akpọ ibi n'ime ụgbọ ala Vehicular Homelessness, ọ na -abawanye na obodo n'ofe US. Enwere ihe karịrị mmadụ 16,000 bi n'ụgbọ ala ha na Los Angeles, California, naanị.
N'obodo ụfọdụ, e tiri iwu ịlụso ndị na -enweghị ebe obibi ọgụ site na ihi ụra n'ime abalị n'ụgbọala ha. Obodo ndị ọzọ nwere obi ọmịiko na -arụ ebe a na -adọba ụgbọala ka ndị mmadụ na -adọba ụgbọala n'abalị ka ha rahụ n'ụgbọala ha. Asịrị na -ekwu na WalMart nwere ike ịgbaghara ụgbọ ala na -ehi ụra n'ọdụ ụgbọ ala ha.